Inkqubo yokuQinisekisa iMveliso ye-MCSE - ITS Tech School
1 UCanzibe 2017
Iingcali ze-IT kufuneka zinezinto ezifanelekileyo kunye nolwazi ukuqinisa nokulawula ukuthengiswa kwezinto ezixhobisa abathengi bokugqibela ukuqhuba ishishini. Ukuqinisekiswa kweMveliso ye-MCSE inikeza i-IT ithuba lokunika ithuba lokuqinisekisa iintlobo zeempawu ezichongiweyo kwezinye zezinto eziphambili zeMicrosoft, kuquka i-SharePoint, i-Skype yeBusiness, kunye ne-Exchange Server. Ngokubanzi, ukuqinisekiswa kweMveliso ye-MCSE kukufanelekela abafundi kwizikhundla, umzekelo, usihlalo ophakamileyo ophezulu, umongameli we-IT, umveleli wesigqeba, ootitshala bezakhelo eziphezulu, kwaye oko kuyisiqalo.
Isiqinisekiso seMicrosoft Certified Expert (MCSE) isiqinisekiso sokuvelisa isiqinisekiso sokuthi abafundi banokwenza oko kulindeleke ukuba bathathe inxaxheba kwilifu, ukunyuka kwamakhasimende kunye nokulungelelanisa, ukunciphisa ulwazi olubi, nokuphucula ulwazi lokhuseleko. I-MCSE: Imveliso, efana nayo yonke inqanaba lokuqinisekisa phantsi kwesakhiwo esitsha seMicrosoft, ivumela abafundi ukuba bajonge phezu kweqela leemviwo ukuze baphinde baphinde baphinde baqinisekise ngokuyimfuneko yabo.
Ukuze ufaneleke ukufaneleka kwi-MCSE: Ukuqinisekiswa kwemveliso, abafundi kufuneka baqale bawine i-MCSA: I-Office 365 okanye i-MCSA: Ukuqinisekiswa kwe-Windows Server 2012 njengento ebalulekileyo. Emva kokufumana ukuqinisekiswa okubalulekileyo, abafundi kufuneka bathathe uvavanyo olongezelelweyo lokufumana i-MCSE: Ukuqinisekiswa komveliso.
I-MCSE: I-pool yeemviwo zokuvelisa iqukethe iimviwo ezisibhozo, ezinye zazo zikhuselwe yi-CBT Nuggets ezilungiselela.
Ukucwangcisa nokuSebenzisa iMicrosoft Exchange Server 2016 (70-345)
Ukujonga i-Microsoft SharePoint Server 2016 (70-339)
Ukuhambisa i-Enterprise Voice kunye ne-Skype yeBusiness 2015 (70-333)
Izixazululo ezingundoqo zeMicrosoft Skype yeBusiness 2015 (70-334)
Izixazululo ezingundoqo ze-Microsoft SharePoint Server 2013 (70-331)
Izixazululo eziphambili ze-Microsoft SharePoint Server 2013 (70-332)
Izixazululo ezingundoqo ze-Microsoft Exchange Server 2013 (70-341)
Iingxaki eziphambili ze-Microsoft Exchange Server 2013 (70-342)
I-MCSE: Ukuqinisekisa ukuvelisa, ukuqhutyelwa kwi-2016 njengokuba kufakwe indawo ye-MCSE: i-SharePoint, i-MCSE: uLonxibelelwano, kunye ne-MCSE: Imvume yokuthumela imiyalezo, eyashiyiweyo ngoMatshi 31, 2017.
Ngokuphindaphindiweyo, abafundi abafuna emva kokuqinisekisa ubungqina bezinga kufuneka babe neethathu (3) okanye ngaphezulu kweemisebenzi zokusebenza zeMicrosoft, ngakumbi i-Office 365 okanye iWindows Server 2012 (okanye i-2016).
Iimvavanyo ezihambelanayo ezihambelanayo zichaphazelekayo kuzo zonke iimviwo kwiziko lezinye iindlela ezenza i-MCSE: Ukuvunywa kwemveliso.
Ixesha elichongiweyo lokuhlola: iiyure ze-2 (imizuzu ye-120) ngokuhlola
Inani lemibuzo: 40-60 * kwisifundo ngasinye
Amanqaku okupasa: 700 ** nganye vavanyo
Iindidi zee dilesi: Izigqibo ezininzi; izigqibo ezahlukeneyo / iimpendulo ezininzi; imeko
Ukubhaliswa kweemviwo: iMicrosoft Learning okanye iPerarson View
Kuya kuba yinto efanelekileyo ukuba uqaphele ukuba yi-MCSE: Ukuhlolwa kwemvume yokuvelisa inokuthi kufumaneke ukuthunyelwa kwe-intanethi.
Iindleko zokuhlola: i-$ 165 (USD) nganye
Iikhono lokulinganisa: Iphepha ngalinye lokubhalisa kwiziko leMicrosoft linikezela i-Skills Measured (assets free) ukulawula ukuhlaziywa kwakho nokulungela.
* IMicrosoft ayifaki ukwabelana nenani elichanekileyo lemibuzo echaphazelekayo kunye neemviwo zayo. Ngako oko, ubungakanani bemibono umfundi ayoyibona eyahlukileyo kwiimeko-ze-case.
** Ngenxa yokuba ubuninzi beemibuzo ehlukileyo, akunjalo ngokwenene ukuba abafundi mabaphumelele ipesenti ze-70 zokudlula ukuhlolwa.
Iimvavanyo zeMicrosoft ziyaziwazisa ukuvavanya. Abafundi abaninzi bafumanisa ukuba kufuneka bathathe uvavanyo ngaphezulu kweyodwa ukuze bafezekise umphumo osebenzayo. Ngenhlanhla, uMicrosoft uyazi malunga nomgangatho wovavanyo oluhambelana neemviwo zabo, kwaye rhoqo unikeza i-Exam Replay, enika abafundi ithuba lokufumana iimviwo kwixabiso elincinci leendleko. Ukuba ayikho inkathazo eninzi ingqalelo ukuba i-Replay Replay ayinakufumaneka ngokubanzi. Njengaloo mhla wokusasazwa kweposi, nganye yeemviwo ezihlobene ne-MCSE: Uveliso luquka i-Exam Replay, nangona oko kungatshintsha. Abafundi kufuneka bahlolisise i-Exam Replay ekufikeleleni ukuba bayeke ukudlulisela ithuba elikhulu lomnyango ovulekile.
Ukuvunyelwa kweMicrosoft MCSE kusemthethweni ixesha elide. Njengoko kuboniswe yiMicrosoft, iimviwo zokuhlaziywa njengokuba zifikeleleke ngoku zonke ii-MCSE kunye ne-MCSD zamabango. Iimviwo zokuvavanya ngokutsha zivela kwiimviwo ezifunyenwe ekuqaleni ukuba zithenge i-qualification, ngokugxininiswa ngokukodwa kwizinto ezintsha ezintsha kunye neenguqu zenkqubo. Ngesakhiwo esitsha sokwenza uvavanyo ekuqhubekeni nokufundiswa, abafundi banethuba lokuthatha uvavanyo lokukhetha ukukhetha kwabo minyaka yonke ukuba "bafumane kwakhona" ukuqinisekiswa.
I-MCSE: Uphuhliso luqinisekisa ubungqina bezinga, nangona kunjalo njengomthengisi ukuqinisekiswa ngokukodwa, abafundi banokwandisa ukuqala kwabo okanye badibanise ngakumbi ngakumbi kwiimpawu ezingaphezulu zeMicrosoft njengemigangatho elandelayo.
Ngaphakathi kweMicrosoft yendalo, i-MCSE: Uphuhliso lusekelwe ekusekeni kwe-MCSA: Windows Server 2012 kunye ne-MCSA: Ukugunyazwa kwe-Ofisi ye-365, ukunika abafundi izigqibo zokuqinisekisa ezinxulumene noko:
I-MCSA: I-Ofisi ye-365 (equkethe iimviwo ezimbini: 70-346 kunye ne-70-347)
I-MCSA: I-Windows Server 2012 (eneemviwo ezintathu: 70-410, 70-411, kunye ne-70-412)
I-MCSA: I-Windows Server 2016 (eneemviwo ezintathu: 70-740, 70-741, kunye ne-70-742)
I-MCSA: I-Windows 10 (equkethe iimviwo ezimbini: 70-697 kunye ne-70-698)
MCSE: Imveliso (khangela ezo zizodwa: I-Exchange Server 2016 okanye i-2013, i-SharePoint Server 2016 okanye i-2013, okanye i-Skype ye-Bhishini)
MCSE: I-Platform yamafu kunye nezibonelelo (upheqa olu buchule: I-Azure, i-Cloud Data Platform, i-Big Data Analytics, iWindows Server 2016, i-Infrastructure Server, okanye i-Private Cloud)
MCSD: I-App Builder (phequlula ezi zizodwa: I-Azure, i-Universal Windows Platform, i-SharePoint 2013, okanye i-Visual Studio)
Abafundi abafumana i-MCSE: Ukuqinisekiswa koveliso ngama-sysadmins rhoqo, kwaye njengesikhokelo sabalawuli, kukho ixesha elininzi kwimfuneko yolwazi kunye nobuchule obuchanekileyo ngokuveliswa kwemithombo evulekile kunye nokusebenza. Ngaloo ndlela, ngaphandle kwendalo yonke yaseMicrosoft, abafundi banokuthi baqaphele ngokubanzi:
I-CompTIA Linux + kunye ne-LPI LPIC-1 (equkethe iimviwo ezimbini: LX0-103 kunye ne-LX0-104)
Izixhobo zeVMware vSphere 6 (ezibandakanya uviwo olulodwa: vSphere 6 iziseko 2V0-620)
I-LPI i-LPIC-2 (equkethe iimviwo ezimbini: 201-400 kunye ne-202-400)
I-VMware vSphere 6 VCP6-DCV (equkethe kuphela uvavanyo olulodwa: VCP6-DCV)
I-Payscale.com inikeza incwadana yokuhlawula isinxephezelo sokuncedisa abafundi ukuba banqume izikali zokuhlawula ezifanelekileyo zokuvulela umsebenzi onxulumene ne-MCSE accreditations. I-Payscale.com ibikela ubungakanani benkcitho phakathi kwe-50,075 ne-$ 144,966 yeenkwenkwezi ze-IT ezibambelele ukuvunyelwa kwe-MCSE, kuquka iMCSE: Uphuhliso. Iziqendu eziqhelekileyo kulabo abambe isiqinisekiso se-MCSE ziquka umphathi we-IT, umphathi we-IT, umphathi wezikhokelo, kunye nezikhokelo eziphezulu.
Imvume yeMicrosoft iboniswe njengepiramidi, ngalinye nqanaba lokuqinisekisa ukuqhubela abafundi kubafundi abaphezulu, bodwa, bodwa. Ngesiseko sepiramidi yeMicrosoft, iingcali ze-IT zakha ukusekwa kokufunda kunye ne-MTA (i-Microsoft Technology Associate). Eli nqanaba lilandelayo yi-MCSA (Associated Certified Associate Microsoft) kunye ne-MCSD (iMicrosoft Certified Solutions Developer), equka inkalo eninzi kakhulu kwiingcali ze-IT ezinikezwa yi-Microsoft, kuquka i-Server 2012, i-Office 365 kunye ne-Azure. Ekugqibeleni, i-MCSE (iMacrosoft Certified Solution Expert) ithetha inani elingaqhelekanga lokuvunywa kweMicrosoft kwaye linika abafundi ithuba lokudala izakhono ezichongiweyo ze-MCSA.
Njengoko iMicrosoft ibonisa, i-MCSE kunye ne-MCSD yemvume (i-MCSE: i-Platform yamaFlathi kunye neZiseko, i-MCSE: ukuhamba, i-MCSE: uLawulo loLwazi kunye ne-Analytics, i-MCSE: iMveliso, kunye ne-MCSD: i-AppBuilder) ichitshiyelwe kumaziko oPhezulu, asetyenziswa yiMicrosoft I-Network Partner ukuhlukanisa izakhono ezizodwa ezingenakunakwenzeka ngokuzibandakanya kweMicrosoft kunye nabaxhasi. Ezi zatifikethi ayinayo imfuneko yokuvuselelwa kwakhona. Kunoko, umhla wokufezekisa ubonisa indlela ohlala uyazi ngayo utshintsho kwizinto ezintsha.
Unyaka wonke, unalo ithuba lokuvuselela ukuvunywa ngokudlulisa uviwo ukusuka kwinqanaba lokukhetha, ukubonisa umdla wakho wokwandisa okanye ukwandisa ubuchule bakho kwiziko leZiko eliPhambili. Njalo xa ufumana imvume, enye inqaku lokuqinisekisa longezwa kwingxelo yakho. Le nqubo ithatha indawo efunekayo yokuvuselelwa kwangoku ukuba ithathe uvavanyo oluthile lokuhlaziywa rhoqo (MCSD) okanye ufana ne-clockwork (MCSE) ukugcina ukuvuma kwakho ukuhamba. Thatha okungakumbi malunga nesakhiwo esitsha sokuqinisekisa iMicrosoft.
Qala ukuphanda ezinye iindlela zeMicrosoft zokulungiselela nokuqinisekisa ukuba zivule ukuvula izixhobo ezingakumbi.
I-MCSE: Ukuqinisekiswa kwemveliso kubonisa ukufaneleka kwakho kunye nomsebenzi womsebenzi ngokuqhubekayo nokufunda ngokuhambelana nokuqhubela phambili kweMicrosoft, kubandakanywa izinto eziqhelekileyo, umzekelo, Exchange Server, Skype for Business, kunye ne SharePoint. Esi siqinisekiso sihamba malunga nobubungqina bokuqinisekiswa kwakho kunye nokukwazi ukujongana nezinto ezisemgangathweni zendalo. I-MCSE yakho: Isiqinisekiso sokuvelisa siza kuvula i-insortment ye-vocation evulekileyo iminyango evulekile njengoko uzama ukwanelisa iinjongo zakho zeengcali.